16 | April | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
မြန်မာမွတ်စလင်မ် သမိုင်းနဲ့သွေးအတွက်ရတဲ့ …အသိအမှတ်
Open letter to our Myanmar friends to help stopping racial riots
Dear Bama Buddhist friends,
Please just kindly look at Indians and Chinese in Malaysia. They speak their own Indian & Chinese languages and even go to their respective schools. They read their own newspapers, watch their respective TV, Video, movies etc.
In contrast to them, if you look at Myanmar Muslims: we speak, read, wear and behave as Myanmars and tried to assimilate ourselves into the mainstream population.
Tags:Buddhism, Islam, Islam in Burma, Jews, Kala, Malaysia, Muslim, Myanmar
Request to our mother, With love
ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီး အငြင်းပွားတာ ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ထာတဲ့လား အမေရယ်။
ဆိုင်းတောင်မှာ လူ၁၅၀ လောက်က ဝတ်ပြုဆောင်တခုကို ညနေ၅နာရီလောက်ကနေ ည၁နာရီခွဲလောက်အထိ မီးစက်တွေနှိုး မီးမောင်းတွေထိုး အမြစ်ကစလှန်ပစ်လိုက် တယ်။တဖက်က လူနဲစုတွေက လူကိုရန်ရှာကြမှာစိုးလို့ ရှောင်နေကြတယ်။ အဲ့ဒါ အငြင်းပွားကြတယ် ခိုက်ရန်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်မ လားအမေ။
Requests to Bama Buddhists, I got in my mail
ဘာသာရေး အငြင်းပွားမှုတွေ ရှောင်ရှားကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း by-RFA
Tags:Asia, Aung San Suu Kyi, Burma, Myanmar, Naypyidaw, Politics, Thein Sein
Kanma Masjid, destroyed by the mob
Real problem is:Myanmar Military authorities failed to protect and later delayed the approval permits for decades.
မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တို့၏ နေ့စဉ်ဆုတောင်း ဝတ်ပြုရာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်
Sixteenth Conference of Islamic Council’s request to Myanmar President
Tags:Aung San Suu Kyi, Burma, Myanmar, Naypyidaw, Thein Sein
Kamma Town Masjid destroyed in Myanmar
Source: Myanmar Muslim.net_ကံမတွင်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တစ်လုံး နှင့် နေအိမ်များကို လုယက်ဖျက်စီး
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ကံမမြို့နေ မွတ်စလင်မ်၁၀ဦးကျော်၏ နေအိမ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအပါအ၀င် ဗလီဝတ် ကျောင်းတော် တစ်လုံးတို့ကိုဒေသ ခံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အခြားရွာအနီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီး၊လုယက်မှူများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကာယကံမြောက် ကျူးလွန်ခံရသူ နှစ်ဦးမှပြောကြားသည်။
ဖျက်ဆီးသူများသည် ယမန်နေ့ညတွင် ကံမမြို့အနီးရေနံသာရွာနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဦးသိန်းလွင်၏ နေအိမ်ကိုလည်းဆက်လက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း လည်းကောင်းတို့က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
Tags:Asia, Aung San Suu Kyi, Burma, Myanmar, Naypyidaw, Thein Sein